BUKA: Angene ngeVosho ePhalamende amalungu-EFF
ANGENE ngevosho amalungu e-EFF ePhalamende ngesikhathi efungiswa namhlanje
MCEBO MPUNGOSE | May 22, 2019
ANGENE ngevosho ePhalamende amalungu-EFF ngesikhathi kufungiswa amalungu ePhalamende eKapa ngoLwesithathu.
Kuzokhumbuleka ukuthi esinye seziqubulo ezihambe phambili ezinkundleni zokuxhumana ngesikhathi sokhetho kube ngese-EFF esithi #Okusalayo sizovotelal i-EFF. Kuthe sekucaca imiphumelo ngemuva kokhetho lokaMeyi 8, ama-red beret aqala athi ‘sizongena ngevosho’ ePhalamende sekucacile ukuthi i-EFF izokwandisa izihlalo zayo.
NgoLwesithathu umholi we-EFF,uMnuz Julius Malema ubehola amanye amalungu eqembu becula beshaya namavosho ngaphamabi kokufungiswa ePhalamende.
Nangesikhathi eseyofungiswa uMengameli wamaJaji, uMalema ushone phansi wadedela enye ivosho, okwenziwe cishe yiwo wonke amalungu e-EFF.
[MUST WATCH]: CIC @Julius_S_Malema leading the VOSHO brigade #EFFinParliament pic.twitter.com/M0duKFxI3S
[MUST WATCH]: The #EFF44 led by CIC @Julius_S_Malema cruising into the National Assembly, ingena nge-VOSHO #EFFinParliament pic.twitter.com/bAnJ97W07M
Ngemuva kokulala endaweni yesithathu okhethweni lukazwelonke i-EFF ithole izihlalo eziwu-44 ePhalamende.
NgoLwesibili umengameli we-ANC ozofungiswa njengomengameli wezwe ngoLwesihlanu, uMnuz Cyril Ramaphosa uncome i-EFF ngemiphumela eyithole okhethweni wathi isebenzile ngoba ngisho ezifundazweni yenze kahle.